Salad - ubuciko real, umlando olwaqala emakhulwini amaningi eminyaka adlule. Phakathi kwayo yonke le minyaka, abantu beveza amashumi ezinkulungwane zokupheka ezahlukene, ngalinye elikwazi ufanelwe ukuqashelwa okukhethekile. Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, ethi "Izigodlo" isaladi. Manje kunzima ukusho owaqala salungiselela. Nokho, nahlulele ngegama, umuntu angabona ukuqagela ukuthi bangabafokazi izindela. Cishe, baqamba isidlo nawe ungadla ngokuphepha ngesikhathi ukudla zenkolo. Kuze kube manje, kukhona ezimbalwa kweshumi izinguqulo ezihlukene kule isaladi. Ngokwesibonelo, cabanga ezithakazelisayo iningi labo.
Excellent kukho kwemenyu mafutha angase bayisibonelo isaladi "Izigodlo", kuphekwe ngokuvumelana zokupheka amakhosi asempumalanga. Yenza kube lula. Udinga nje kuphela ukuba pre-ukuthenga imikhiqizo ezilandelayo: 2 utamatisi, radishes 10, 2 amazambane, ulethisi, 2 ikhukhamba, iklabishi Chinese, amakhambi fresh, futhi ¾ inkomishi imbewu ithanga imbewu sunflower.
Ukuze ukugcwaliswa: Sauce "Worcester", usawoti, uwoyela Sesame kanye pepper.
Ilungiselela "Izigodlo" isaladi ngokushesha kakhulu:
Okokuqala udinga kancane Fry imbewu. Kwenze kangcono epanini ezomile.
Ngemva kwalokho, kubalulekile ukuba usike imifino. Ngenxa yale njongo kubalulekile ukusika utamatisi, ukhukhamba - amakota, abilisiwe amazambane - cubes kanye isithombo - tincetu mncane.
Khona-ke kubalulekile ukuba sidilike izikwele iklabishi, oqoshiwe amakhambi fresh and isaladi nje izinyembezi ngesandla.
Yonke imikhiqizo uzilungiselele ukuba abuthele kwelinye isitsha, engeza usawoti ukunambitha bese wengeza pepper kancane.
Isizini nenye ibhotela uhlanganise sauce ukuze ukunambitheka amaconsi ambalwa.
It kuvela isaladi emangalisayo "Izigodlo", okungaba kufanele ngokuthi yemifino dish yangempela. umphumela wayo lomkhulu ukugcwaliswa yasekuqaleni. isisekelo salo iyona uwoyela Sesame, okuyinto eMpumalanga zithandwa kakhulu.
AmaRashiya babe nomqondo yabo indlela engcono isaladi, "Izigodlo". Indlela Yokuthola lokhu dish is ngokukhethekile eyenzelwe kwesikhathi Ebolekwe. Ukuze usebenze kudingeka izithako kakhulu elula: 3 amazambane, 1 utamatisi, amakhambi fresh, isigaxana sikagalikhi, 1 ikhukhamba zifakwe emanzini anosawoti bese amafutha zemifino.
Yonke inqubo yokulungiselela lo isaladi ihilela izinyathelo ezimbili eziyisisekelo:
Into yokuqala okudingeka ukuba usike yonke imifino. Lokhu kungenziwa ezinqumela. Azikho yini imithetho ekhethekile neziqondiso. Kodwa kungcono uma tincetu makhulu. Kungenjalo, isaladi kungenziwa ibe ebukekayo "amakhowe."
Ukulungele ubuthe izithako endishini isaladi bese ugcwalisa ngamafutha.
It uphendulela isaladi elula kodwa esihlwabusayo "Izigodlo". Indlela ezithakazelisayo ngoba cishe akazange asebenzise usawoti kanye izinongo. By the way, kungukuthi ezidingekayo. Flavour ibhalansi ulungisa ukhukhamba ne bhotela kusiza kuphela hlanganisa ngephunga ngabanye kuzo zonke izingxenye.
Phakathi inombolo enkulu zokupheka izitsha efanayo ungahlala ukuthola eyodwa evumelana engcono igama layo futhi indaba ephathwayo. Ngakho ibhekwa njengendawo elungile kakhulu, yebo, isaladi "Izigodlo" iklabishi. Yena vegan ngempela, yemifino kanye mafutha ngempela. Ukuze silungiselele enjalo ulethisi isidingo: 500 amagremu iklabishi, 2 ikhukhamba fresh, pepper 1, 20 amagremu kasawoti, 30 amagremu apple cider uviniga, amakhambi (parsley, basil, dill) futhi 8 amagremu ushukela.
Imifino sibe yimichilo mncane. Kungcono ukwenza akusiyo eside kakhulu, ngakho-ke kwaba elula ukudla isaladi.
Iklabishi afafaze i-usawoti kancane futhi kancane bahlanganise izandla zakho, ngakho-ke ake ijusi.
ukudla ukuze abuthele kwelinye isitsha ejulile bese wengeza ukuba lonke izithako.
Hlanganisa kahle, amboze ipuleti ehlanzekile ukunikeza isidlo sokumelela kancane.
Lokhu fresh futhi elimnandi isaladi ephelele iliphi iholide. Akubalulekile ukuba uhlamvu zenkolo.
Dish iphunga ehlathini
ngokukhethekile kufanele isaladi "Izigodlo" nge amakhowe. Iphinde ingalungiswa ngezindlela ezahlukene. Ukuze itafula iholide okufana ekahle lapho izingxenye ezilandelayo zisetshenziselwa: 2 u-anyanisi, boletus omisiwe 8, usawoti, 3 izaqathe ezinkulu, emnyama, 135 amagremu kawoyela yemifino kanye umusi wezipuni utamatisi unama.
Lungisa isidlo udinga kusengaphambili:
Okokuqala, udinga amakhowe amahora ambalwa cwilisa ngamanzi abandayo, bese ukubilisa kuze athambe.
Izaqathi sibe yimichilo bese ukuphela imizuzu-15 amafutha, unezela amanzi kancane.
Bow zimfundiso ziba yize isigamu-amasongo, bese passaged kuze luhlaza segolide.
Hlanganisa kokubili imikhiqizo, bangeze pasta, izinongo kanye imizuzu imizuzu 5-6.
Thela uzilungiselele ingxube abilisiwe amakhowe futhi ukuxuba ezinhle.
Ngaphambi ukusetshenziswa, lokhu isaladi okumelwe ukwenze ukuba ume endaweni epholile futhi bayafundisa okungenani amahora 10-12. Kuphela ngemva kwalokho sizokwazi ukuletha etafuleni.
Salad "iZihlobo Zasehlathini": iresiphi for the emizi yangempela
Umlingisi ifilimu "Fast and Furious" Mia Toretto: Biography of actress, owenza lokhu indima